Kutladda Haweenka ee Baarlamaanka oo la kulmay Guddiga Wadajirka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka Sharciga Doorashooyinka – Kalfadhi
Guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka Qaranka ayaa kulan la-tashi iyo xog-wareysi ku saabsan dhammaystirka xeerarka Sharciga Doorashooyinka Qaranka la yeeshay kutladda haweenka Baarlamaanka Federaalka.
Kulanka waxaa shir-guddoominayay Guddoomiyaha Guddiga Xil. Ibraahim Isaaq Yarow. Wasaaradda Haweenka oo ay hoggaamineyso Wasiirada Haweenka Marwo Deqa Yasin iyo Ururada Haweenka wuxuuna ka dhageystay fikirkooda iyo tallooyinkooda ku aaddan afarta Xeer ee Guddiga loo diray.
Qaar kamid ah haweenkii ka qeyb-gallay kulanka ayaa guddiga usoo jeediyay in doorka haweenka ee ka qeyb-galka doorashooyinka la muujiyo.
Baarlamanka Soomaaliya oo ku shiri doona adeegga internet-ka ee maqal iyo muuqaalka